Soo-saareyaasha iyo Soo-saareyaasha Hawo-warshadaha - Shiinaha Warshadda Hawada ee Hawada
cusub qaboojiye nidaamka qaboojinta marinka hawada warshadaha XK-25H
XK-25H nidaamka qaboojiye ee tubbada cusub ee qaboojiyaha warshadaha ayaa ah qaboojiyaha hawada ee warshadaha cusub ee ay soo saartay XIKOO. waxaa jira kor, hoos, dheecaan hawo dhinac ah oo si haboon ugu rakibaysa darbiga, saqafka iyo meelaha kale.Tababarkan cusub oo leh suufka qaboojinta oo sareeya, uumi baxa wanaagsan iyo qaboojinta. A ...
ahama warshad weyn oo warshad weynta ooler XK-30 / 35/45 / 50S
XK-30/35/45 / ahama weyn qaboojiyaha hawada warshadaha weyn centrifugal loogu talagalay aqoon isweydaarsi weyn. Iyada oo hawo weyn leh iyo cadaadiska hawada, masaafada gaarsiinta hawadu aad bey u fog tahay 100-200meters. Waxaa loogu talagalay inay ahaato suunka geerida marawaxadaha oo leh qolof bir adag oo waara. Erey sare oo wax ku ool ah ...